इन्सुलिनको मूल्यहरू: इन्सुलिनको मूल्य कति छ? - कम्पनी, औषधि जानकारी | सेप्टेम्बर 2021
स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार कम्पनी, औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण कम्पनी औषधि जानकारी, समाचार औषधि बनाम मित्र औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा समाचार समुदाय कम्पनी, चेकआउट समुदाय, कल्याण चेकआउट भारी खेल औषधि जानकारी समुदाय, कम्पनी
मुख्य >> कम्पनी, औषधि जानकारी >> इन्सुलिनको मूल्यहरू: इन्सुलिनको मूल्य कति छ?
संयुक्त राज्य अमेरिकामा मधुमेह कुनै सानो समस्या छैन। संयुक्त राज्य अमेरिकामा लगभग approximately०.। मिलियन मानिस मधुमेह भएका छन् मधुमेह अनुसंधान संस्थान । ती मध्ये percent प्रतिशत - वा १. million मिलियन मानिसहरुमा टाइप १ मधुमेह हुन्छ र बाँच्नको लागि इन्सुलिन चाहिन्छ। टाइप २ मधुमेह भएका केहि व्यक्तिले आहार र गतिविधिमा रगतमा चिनी नियन्त्रण गर्न सक्दछन्। अझै पनि धेरैलाई ईन्सुलिन चाहिन्छ, विशेष गरी अवस्था बढ्दै जाँदा।
र दुर्भाग्यवश, विगत १० बर्षमा इन्सुलिनको मूल्य नाटकीय रूपमा बढेको छ। २०१२ र २०१ween को बीचमा, मूल्य झन्डै दोब्बर भयो स्वास्थ्य सेवा लागत संस्थान । २०१२ मा प्रति मधुमेह बिरामीलाई इन्सुलिनको औसत लागत $ २88। प्रति वर्ष थियो। २०१ 2016 सम्ममा यो बढेर $ ,,70०। पुगेको थियो। आज, इन्सुलिनको एक शीशीले $ २ .० खर्च गर्न सक्दछ, र केही व्यक्तिहरूलाई प्रत्येक महिना six वटा शीशाहरू चाहिन्छ।
यसको अतिरिक्त, त्यहाँ अन्य मधुमेह आपूर्तिहरू छन्, जस्तै ग्लुकोज मोनिटर, परीक्षण स्ट्रिपहरू, लान्सेटहरू, र प्रयोग गरिएको सिरिंज वा पेन भण्डार गर्नको लागि सुरक्षित ठाउँ। यो सजिलैसँग बीमा बिना कसैको लागत लिन सक्दछ $ १3०० प्रतिमहिना सर्तका लागि हेरचाह गर्न। पनि संग बीमा, copyayments र आपूर्ति तपाइँको मासिक बजेट मा टाढा खान सक्छ। भाग्यवस, त्यहाँ बचत विकल्पहरू छन्।
इन्सुलिनको बोतल कति छ?
एक इन्सुलिन शीशीको लागत तपाईले प्रयोग गर्ने इन्सुलिनको प्रकार र तपाइँ यसको लागि कसरी भुक्तानी गर्दै हुनुहुन्छ फरक हुन्छ। तर, लागत कुनै फरक पर्दैन, नगद मूल्य तिर्ने विकल्पहरू छन्।
यदि तपाईंसँग बीमा छैन भने, ईन्सुलिन उत्पादनहरू बनाउने औषधि कम्पनीहरूले बिरामी सहयोग कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दछ, वर्णन गर्दछ माइकल कर्नाथन MD , पेन्सिलभेनियाको बेथलेहेममा एक बोर्ड प्रमाणित परिवार चिकित्सक। धेरै जसो समय, बिरामीले नि: शुल्क वा धेरै कम लागतमा इन्सुलिन लिन सक्दछ।
स्वास्थ्य बीमा बिना ती लागि, पुरानो मानव इन्सुलिन कहीं पनी प्रति ial 25 देखि $ 100 सम्म लागत; उदाहरणको लागि, वालमार्टसँग मानव इन्सुलिन प्रति शीस $ २ at मा उपलब्ध छ। नयाँ मानव एनालग इन्सुलिनको मूल्य प्रति भायल १ देखि $ between०० बिचको लागत हुन्छ रिपोर्ट २०१ 2018 मा प्रकाशित भयो ।
कसरी एक सकारात्मक औषधि परीक्षण विवाद गर्ने
एक बोतल इन्सुलिन बीमा संग कति खर्च हुन्छ?
यो भन्न गाह्रो छ कि तपाईंको स्वास्थ्य योजना मार्फत भुक्तान गर्दा इन्सुलिनको शीसी कति खर्च हुन्छ। प्रत्येक बीमा योजना मा इन्सुलिन उत्पादनहरु अलग अलग कवर।
डा। कर्नाथन भन्छन् कि जब तपाईसँग स्वास्थ्य बीमा कभरेज हुन्छ तब उचित मूल्यको लागि इन्सुलिन पाउनु समस्या नै हुन्छ। ती अवस्थाहरूमा बिरामीहरूलाई कहिलेकाहिँ फरक र सस्तो प्रकारको इन्सुलिनमा जान बाध्य हुन्छन् जसलाई एनपीएच भनिन्छ वा others०/ called० का केहि अन्यमा। यी इन्सुलिनहरू धेरै समयदेखि यथेष्ट छन् र सस्तो छन्। बिरामीलाई एक प्राथमिक हेरचाह चिकित्सक वा एन्डोक्रिनोलॉजिष्टको आवश्यकता पर्दछ जो यी पुराना इन्सुलिनहरू प्रयोग गरेर सहज रूपमा समायोजित हुन्छन्।
प्रत्येक स्वास्थ्य योजना कापीहरू र कटौतीयोग्यहरू पनि फरक-फरक हुन्छन्। उदाहरण को लागी, एक उच्च कटौती योजना को साथ मानिसहरु को लागी, तपाईले कटौती योग्य पूरा नगरे सम्म इन्सुलिन को लागि नगद मूल्य तिर्ने छ। केहि प्रतिलिपिहरू औषधीको लागतको %०% सम्म बढ्न सक्छ।
यो कहिलेकाँही मेडिकेयरमा व्यक्तिलाई इन्सुलिन वहन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। धेरै बिरामीहरू जसले इन्सुलिनको उच्च मूल्यको सामना गरिरहेका छन् आफैलाई मेडिकेयर डोनट होलमा समाते, भन्छन् गेल ट्राको, आरएन का प्रमुख सीईओ फार्माकन एलएलसी ।
बीमा नभएको ग्राहकहरु जस्तै, बिरामी सहायता कार्यक्रम मेडिकेयर ग्राहकहरु लाई सहयोगी हुन सक्छ। जे होस्, यी कार्यक्रमहरूलाई एक अनुप्रयोगको आवश्यक पर्दछ, जुन समीक्षा र अनुमोदनको लागि to० देखि 60० दिन लिन सक्दछ, र तपाईंको मासिक लागत-बस्ने खर्चको पुष्टि गर्न रसिदहरूको साथ कागजात।
इन्सुलिनको उच्च मूल्यको बारेमा सार्वजनिक हलचलको कारण, केही बीमा कम्पनीहरू र औषधि कम्पनीहरूले मासिक लागत घटाउन कदम चालेका छन्। उदाहरण को लागी:
सिग्ना र एक्सप्रेस स्क्रिप्टहरू महिनाको out २ at मा मासिक बाहिरको पकेट लागतहरू क्याप गर्दै छन्। एक्सप्रेसस्क्रिप्ट्स अनुमान छ मधुमेह भएका करिब with००,००० व्यक्ति यी बचतहरूको लागि योग्य हुनेछन्। यद्यपि रोजगारदाताहरूले यस कार्यक्रममा अप्ट इन गर्नुपर्दछ।
सानोफी, इन्सुलिनको प्रमुख आपूर्तिकर्ता हो, नगद भुक्तानीकर्ताहरूका लागि एक कार्यक्रम सिर्जना गर्दैछ। यो कार्यक्रमको लागि प्रतिमहिना per costs costs लागत र या त १० शीशाहरू, १० बक्स कलम, वा दुईको संयोजन प्रदान गर्दछ। चिकित्सा, मेडिकेड, वा अन्य संघीय र राज्य प्रोग्रामहरू भएका व्यक्तिहरू यो कार्यक्रमको लागि योग्य छैनन्। अरू कोही पनि, उनीहरूसँग स्वास्थ्य बीमा छ कि छैन, तिनीहरू आफ्नो इन्सुलिनको लागि नगद तिर्नेमा सहभागी हुन सक्छन्। $ All सबै लागत कभर हुन सक्दैन, र आपूर्ति अतिरिक्त लागत हुन सक्छ।
एली लिली हालसालै Humalog को जेनेरिक संस्करणको साथ बाहिर आयो जुन आधा मूल्यको लागि बिक्री हुन्छ, प्रति शीस १..35 डलरमा।
इन्सुलिनमा उत्तम मूल्य चाहनुहुन्छ?
इन्सुलिन मूल्य सचेतका लागि साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
के इन्सुलिन शीशी कलम भन्दा सस्ता छन्?
इन्सुलिन भायलहरू (सिरिन्जहरू मार्फत) र इन्सुलिन पेनहरू बीच इन्सुलिनको मूल्यहरूमा उल्लेखनीय भिन्नता छ। कलश भन्दा कम शीशुल प्रयोग कम खर्चिलो छ। यद्यपि, केहि व्यक्तिहरू यो सोच्दछन् कि पेनलाई डेलिभरी प्रणालीको रूपमा प्रयोग गर्दा जीवनको उच्च गुणस्तर प्रदान हुन्छ। कलम प्रिफिल हुन्छ, र जब एनालग औषधिहरू प्रयोग गर्दछ, खुराकको संख्या कम हुन सक्दछ। कलमहरूले तपाई संग इन्सुलिन लिन सजिलो बनाउँछ, अधिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्दछ।
कलम प्रयोग अधिक सुरक्षित, अधिक सुविधाजनक हो, र राम्रो glycemic नियन्त्रण प्रदान गर्दछ,aको अनुसार अध्ययन २०१ 2018 मा प्रकाशित भयो । यद्यपि यस अध्ययनले यो पनि नोट ग .्यो कि कलम प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूले प्रत्येक महिना मधुमेह नियन्त्रणको लागि बढी खर्च गरिरहेका थिए। केही केसहरूमा कलम प्रयोग गर्न यो तीन गुणा महँगो थियो।
इन्सुलिनको एक महिना कति खर्च हुन्छ?
सबैजनाको इन्सुलिनको आवाश्यकता हुन्छ। तपाईलाई कति इन्सुलिन चाहिन्छ भनेर निर्धारण गर्न कुनै एक आकारमा सबै दृष्टिकोण मिल्दैन। ती एनालग इन्सुलिन लिनेहरूले पृष्ठभूमि वा बेसल डोज दिनको एक वा दुई पटक लिन्छन्। यसको विपरित, नियमित मानव इन्सुलिन लिनेहरूले यसलाई दिनमा तीन देखि चार पटक लिन्छन्।
यस क्याडनेस मात्र ईन्सुलिन हो जसलाई टाइप २ मधुमेह भएका मानिसहरूलाई चाहिन्छ। तर टाइप १ मधुमेह, र केहि टाइप २ को लागी, खाना खाने समयमा अतिरिक्त इन्सुलिन चाहिन्छ। कुन इन्सुलिन प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, निर्भर गर्दै, यो तपाइँको खाना अघि १० देखि minutes० मिनेट लिनुपर्दछ। इन्सुलिनको मात्रा तपाईं के खाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ। उदाहरण को लागी, तपाईलाई प्रति कार्बोहाइड्रेट भाग १ 15 युनिट चाहिन्छ (१ grams ग्राम)।
टाइप १ मधुमेह भएका व्यक्तिहरू दिन प्रति दिन दुई फरक प्रकारका इन्सुलिन प्रयोग गर्छन्। तिनीहरू प्रति दिन दुई इंजेक्शनबाट सुरु हुन्छन् र दिन अनुसार तीन देखि चार खुराकमा प्रगति गर्दछन् अमेरिकी मधुमेह संघ (एडीए) टाइप २ मधुमेह भएका व्यक्तिहरू प्रति दिन किलोग्राम शरीरको भार ०.०--0. units एकाइहरूको साथ सुरु गर्न सक्दछन् र अन्ततः प्रति किलोग्राम वजनको १-२ इकाई लिन्छन्। १ 150० पाउण्ड तौलका व्यक्तिका लागि यो दिनको 68 68 देखि १66 इकाई हुन्छ। १55 पाउण्ड तौलका व्यक्तिका लागि, यो प्रति दिन -1०-१60० युनिट हुनेछ।
इन्सुलिनको एउटा शीसमा १००० एकाइहरू हुन्छन्, र कलममा units०० एकाई हुन्छन्।
निम्न तालिकाले v०-दिनको आपूर्तिका लागि तीनवटा भाला वा १० पेन प्रति महिना आधारमा विभिन्न प्रकारका इन्सुलिनको औषधि मूल्यहरू तुलना गर्दछ। तालिकामा औसत इन्सुलिन मूल्यहरू समावेश छन्; जे होस्, तपाईं आफ्नो क्षेत्र र तपाईंको फार्मेसीमा आधारित फरक रकम तिर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको आवश्यकता अनुसार, माथि वा तल लागतहरू समायोजित गर्नुहोस्।
औषधि नाम प्रति प्याकेज औसत मूल्य प्रति महिना औसत मूल्य *
नोभोलोग (इन्सुलिन एस्पार्ट)
नोभोलोग फ्लेक्स पेन $ 3.99 / / शीशी
$ १२3.99 / / कलम 00 1,001.97
हुमालोग (लिसप्रो) $ 316.22 / शीशी 8 8 88..66
ल्यान्टस (इन्सुलिन ग्लार्जिन)
ल्यान्टस सोलोस्टार (कलम) $ 314.99 / शीशी
$ १०..73 / कलम 44 944.97
हुमुलिन एन (इन्सुलिन आइसोफेन)2१२२.77 / कलम 22 १,२२6.70०
नोभोलिन एन (इन्सुलिन आइसोफेन) $ १66.99 / / शीशी .9 500.97
लेभिमर फ्लेक्स्टच (कलम) $ 6.99 / / शीशी
2 ११२.8 / / कलम 40 १4040..9.7
$ ११२। .80०
नोभोलिन आर (इन्सुलिन नियमित) $ १1१.०० / शीशी3483.00
Toujeo Solostar (इन्सुलिन ग्लार्जिन) $ ११.1.१8 / कलम 1 ११1१.80०
ट्रेसिबा (इन्सुलिन डिग्लुडेक)
ट्रेसिबा फ्लेक्स्टच (कलम) $ 1$१.88 / शीशी
$ १२3.१8 / कलम $ १०44.१4
* तीन शीशी वा १० पेनमा आधारित
माथीका लागतहरुका अतिरिक्त तपाईलाई अतिरिक्त आपूर्ति पनि आवाश्यक पर्न सक्छ, जस्तै:
सिरिन्ज: १०० को बक्सको लागि $ १--। २०
परीक्षण स्ट्रिप्स: test २-- 50 50० परीक्षण स्ट्रिपहरूको लागि (प्रति दिन १ देखि १० सम्म कहिँ पनि आवाश्यक पर्न सक्छ)
पम्पहरू: पम्प खरीद गर्न cost cost००० को लागी खर्च हुन सक्दछ plus 00,००० ब्याट्री जस्ता आपूर्तिहरूको लागि
इन्सुलिनको मूल्यमा द्रुत वृद्धिलाई के भइरहेको छ?
त्यहाँ कुनै श is्का छैन कि इन्सुलिनको मूल्यहरु टिपिंग प्वाइन्टमा पुगेका छन् जहाँ केही व्यक्तिहरु उनीहरुको औषधि लिन सक्दैनन्। मा एडीए को लागी प्रस्तुतीकरण , एमआर, इरल बी। हिर्श बताउँदछन् २०१ 2013 देखि २०१ 2016 सम्ममा ग्लेरजिन इन्सुलिनको शीसको मूल्य 593of% र पाँच इन्सुलिन लिस्पप्रो पेन्सको बक्समा 2२२% बृद्धि भएको थियो। त्यस समयमा मुद्रास्फीति 8..3% मात्र वृद्धि भयो। २०१ 2014 मा, औषधि निर्माताहरूले इन्सुलिनको मूल्य दुई पटक बढाए, प्रत्येक पटक करीव १ 16% को लागी। यसको मतलब इन्सुलिनको मूल्य एक बर्षमा %०% बढ्यो।
त्यहाँ इन्सुलिनको उच्च लागतको लागि केवल एक कारण छैन। औषधि कम्पनीहरूले गुनासो गरेको छ कि फार्मेसी लाभ प्रबन्धकहरू (PBM) वाणिज्य बीमा कम्पनीहरूको प्रिस्क्रिप्शन बेनिफिटहरू प्रशासनले बीमा सूत्रमा समावेश गरेको छ भने उनीहरूको इन्सुलिनको ब्रान्ड समावेश गर्न छुटमा आवश्यक छ। तिनीहरूको दावी छ कि उनीहरूको शुद्ध मूल्य सूची मूल्य भन्दा कम छ। तर PBM हरू यो औषधि कम्पनीहरू हो जसले सूची मूल्य सेट गर्दछ।
के तपाइँ meloxicam र ibuprofen सँगै लिन सक्नुहुन्छ
धेरै कारकहरूले इन्सुलिनको मूल्य उच्च राख्छन्:
विश्वव्यापी त्यहाँ केवल तीन प्रमुख ईन्सुलिन निर्माताहरू छन्। थोरै प्रतिस्पर्धा संग, तिनीहरू जे पनी मूल्य निर्धारित गर्न सक्छन्।
जेनेरिक संस्करणको विकास गर्न गाह्रो र लागत निषेधात्मक छ। औषधि उद्योगमा, औषधि निर्माणकर्ताहरूले अन्य औषधिहरूको लागि एफडीएमा अनुसन्धान पेश गर्न सक्दछन् यदि तिनीहरूले प्रमाणित गर्न सक्दछन् कि ती दुई औषधि रासायनिक समान छन्। तर एफडीए तपाईंलाई जैविक इन्सुलिन उत्पादनहरूको लागि समान अनुसन्धान प्रयोग गर्न अनुमति दिदैन। यसको मतलब जेनेरिक इन्सुलिन बजारमा ल्याउनु महँगो प्रयास हुन्छ, केवल ब्रान्ड-नाम औषधीहरू मात्र उपलब्ध छन्।
फार्मास्यूटिकल कम्पनीहरूसँग जस्तै पीबीएममा प्रतिस्पर्धाको अभाव रहेको छ, सीवीएस क्यायरमार्क र एक्सप्रेस स्क्रिप्ट जस्ता कम्पनीहरूले आफ्नै नियमहरू बनाउने क्षमता दिन्छ। हिर्शले स 2013्केत गर्दछ कि २०१ 2013 मा, सीवीएस क्यायरमार्कको राजस्व १२$ बिलियन डलर थियो, र एक्सप्रेस स्क्रिप्ट $ billion अर्ब डलर थियो।
उच्च स्तरको प्रतिस्पर्धाले मूल्यहरू कम गर्दछ, इन्सुलिनको किफायती वृद्धि गर्दछ।
इन्सुलिनको बढ्दो लागतको वास्तविक विश्व परिणामहरू छन्। मिनियापोलिस मा एक समूह कथित रूपमा क्यानाडाको बसमा लिनुहोस् इन्सुलिन खरीद गर्नका लागि मूल्यको एक अंशमा खरीद गर्नुहोस् किनकि यो संयुक्त राज्यमा बेचिन्छ।
केहि व्यक्तिहरु फाँट्ने वा खुराक स्किप गरेर आफ्नो इन्सुलिन राशन गर्दै छन्। दुबैको गम्भीर स्वास्थ्य परिणामहरू छन्। उसकी आमाको स्वास्थ्य बीमा को उमेर पछि, एक 26-वर्षीय मानिस उनको इन्सुलिन र आपूर्ति प्रति महिना3१3०० हुनेछ भनेर उनको फार्मासिष्ट द्वारा सूचित गरिएको थियो। यो उसले आफ्नो रेस्टुरेन्ट प्रबन्धकको तलबमा किन्न सक्ने भन्दा बढी थियो। एक महिना भन्दा कम आफ्नो बीमा गुमाए पछि, उहाँ मरे। उसको परिवारले विश्वास गर्दछ कि उनले आफ्नो इन्सुलिन राशन गर्न थाले, र यही कारणले उनी मारिए।
केही राज्य सरकारहरूले पनि इन्सुलिनको मूल्य घटाउन प्रयास गरिरहेका छन्। कोलोराडोले इन्सुलिन कोपेलाई ured १०० प्रति महिना बिमा गरेको व्यक्तिको लागि क्याप गर्यो। नेवाडाले औषधि मूल्य निर्धारणमा पारदर्शिता बढाउन एक कानुन पारित गर्‍यो, जसले इन्सुलिनको बढ्दो लागत मात्र नभई सबै औषधीको औषधीहरूको बढ्दो मूल्यलाई पनि रोक्न खोज्यो। २ Twenty अन्य राज्यले पनि औषधीको उच्च मूल्यलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले कानून प्रस्ताव गरेका छन्।
इन्सुलिन उत्पादन गर्न कति खर्च हुन्छ?
TO २०१ study अध्ययन अनुमान छ कि मानव इन्सुलिनको एक शीस उत्पादन गर्न $ २.२28- $ $.$२ छ, र एनालग इन्सुलिनको एक शीस उत्पादन गर्न $ $.69--$ .1.१.1 लागत छ। अध्ययनले पत्ता लगायो कि एक वर्ष मानव इन्सुलिनको आपूर्ति प्रति बिरामी $ -$- $ cost१ खर्च हुन सक्दछ, र एनालग इन्सुलिन प्रति वर्ष प्रति बिरामी $ $$- $ १33 खर्च गर्न सक्दछ।
अध्ययनले निर्माण लागत मात्र मापन गर्‍यो। यसमा प्रशासकीय शुल्क, बिक्री, र अनुसन्धान र औषधि सुधार गर्ने विकास समावेश गरिएको थिएन। यद्यपि इन्सुलिन उत्पादकहरूले उत्पादन लागत र खुद्रा खर्चहरूको बीचमा यस ठूलो भिन्नताको लागि पर्याप्त विवरण प्रदान गरेका छैनन्।
कसरी इन्सुलिन मूल्यहरुमा बचत गर्ने
तपाईंको बीमा कम्पनीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् (जो बीमाकृत छन् तिनीहरूको लागि) र तपाइँको नीतिले कसरी इन्सुलिनको लागि भुक्तान गर्दछ भनेर फेला पार्नुहोस्। के उनीहरूले ईन्सुलिनको विशेष प्रकारका लागि अधिक तिर्ने गर्छन्? के तिनीहरूले केहि प्रकारहरू निकाल्छन्? यदि तिनीहरूको भुक्तानी वा बहिष्कारहरू तपाईंले लिने कुरासँग काम गर्दैन भने, विकल्पहरूको बारेमा तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग कुरा गर्नुहोस्। केही बीमा कम्पनीहरूले स्वीकार गर्नेछ पूर्व प्राधिकरण, जसको मतलब तपाईंको डाक्टरले तपाईंलाई किन एक खास प्रकारको इन्सुलिन चाहिन्छ भनेर पत्र लेख्छ। तपाइँको कटौती योग्य के हो र तपाइँलाई कसरी जेबबाट तिर्ने आवश्यकता छ भनेर पत्ता लगाउनुहोस्। सोध्नुहोस् कि यदि तिनीहरूसँग इन्सुलिनको लागि कुनै विशेष कार्यक्रमहरू छन्, जस्तै Cigna द्वारा प्रस्ताव गरिएको।
यदि नगद भुक्तान गर्दै, फार्मास्यूटिकल कम्पनीहरूले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रमहरूको फाइदा लिनुहोस् , जस्तै एक Sanofi द्वारा प्रदान गरीएको। तपाइँ प्रत्येक महिना तिर्नु पर्ने के हो भनेर हेर्न आपूर्ति को अतिरिक्त लागतहरु थप्नुहोस्।
एलि लिली र नोवो नर्डिस्क जस्ता धेरै प्रमुख फार्मास्यूटिकल कम्पनीहरूले प्रस्ताव गरेको बिरामी सहायता कार्यक्रमहरू हेर्नुहोस्, र Rx होप जस्ता केही गैर-नाफामुखी सहायता कार्यक्रमहरू, जसले कम आय र बीमा नगरी निःशुल्क वा कम लागतको लागि सल्लाह प्रदान गर्दछ।
एकको फाइदा लिनुहोस् एकल संग्रहबाट प्रिस्क्रिप्शन बचत कार्ड । ,000 35,००० भन्दा बढी फार्मेसीहरूले एकलकेयर कूपन स्वीकार्छन्। तपाईं आफ्नो जिप कोड अनलाइन वा हाम्रो मोबाइल अनुप्रयोगमा तपाईंको ईन्सुलिनको लागि न्यूनतम मूल्यको साथ फार्मेसी पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसो भए, छुटमा प्राप्त गर्न तपाईको प्रिस्क्रिप्शन र सिंगलकेयर कार्डमा ल्याउनुहोस्। एकलकेयरमा सम्मिलित हुनु सित्तैमा हो।
कति प्रतिशत अमेरिकीहरु मोटो वा मोटो छन्?
जेब बाहिर बनाम कटौती योग्य स्वास्थ्य बीमा
ibuprofen र naproxen सोडियम बीच के फरक छ?
कति जनालाई हामीमा फ्लू हुन्छ
योजना लिइसकेपछि यौन सम्बन्ध राख्नु b